Ndị si Babịlọn bịa zie Hezekaya ozi (1-8)
39 N’oge ahụ, eze Babịlọn, bụ́ Merodak-baladan nwa Baladan, ziteere Hezekaya akwụkwọ ozi na onyinye+ maka na ọ nụrụ na Hezekaya rịara ọrịa ma gbakee.+ 2 Hezekaya nabatara ndị wetara ihe ndị ahụ nke ọma.* O gosikwara ha ụlọ e dowere akụ̀ ya niile,+ ma ọlaọcha ma ọlaedo ma mmanụ balsam ma mmanụ ndị ọzọ dị oké ọnụ ma ngwá agha ya niile nakwa ihe niile dị ebe a na-edowe akụ̀ ya. O nweghị ihe Hezekaya na-egosighị ha n’ụlọ* ya nakwa n’ebe niile ọ na-achị. 3 Mgbe e mechara, Aịzaya onye amụma bịakwutere Eze Hezekaya ma jụọ ya, sị: “Gịnị ka ndị a bịaranụ kwuru? Ebeekwa ka ha si bịa?” Hezekaya asị: “Ha si ebe dị anya bịa, ha si Babịlọn.”+ 4 Aịzaya jụziri ya, sị: “Gịnị ka ha hụrụ n’ụlọ* gị?” Hezekaya asị: “Ha hụrụ ihe niile dị n’ụlọ m. O nweghị ihe ọ bụla dị n’ebe m na-edowe akụ̀ nke m na-egosighị ha.” 5 Aịzaya asị Hezekaya: “Nụrụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, 6 ‘Oge na-abịa mgbe a ga-abịa buru ihe niile dị n’ụlọ* gị nakwa ihe niile nna nna gị hà kpakọtara ruo taa laa Babịlọn. O nweghị ihe ga-afọdụ.’+ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a.+ 7 ‘A ga-akpọrọkwa ụfọdụ n’ime ụmụ ndị nwoke ị ga-amụ, ha aghọọ ndị na-eje ozi n’obí eze Babịlọn.’”+ 8 Hezekaya asị Aịzaya: “Ihe Jehova kwuru, nke ị gwara m, dị mma.” Ọ sịkwara: “Ọ dị mma ma ọ bụrụ na udo ga-adị, obi eruokwa onye ọ bụla ala* n’oge niile m dị ndụ.”*+
^ Na Hibru, “so ndị ahụ wetara ihe ndị ahụ ṅụrịa ọṅụ.”